Atari သည် Ataribox ဟုခေါ်သောဗီဒီယိုဂိမ်းစက်သစ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည် Gadget သတင်း
Elvis bucatariu | | consoles စ
ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းကုမ္ပဏီ၏ Atari သည်ဂိမ်းကစားသူများ၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်များသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကအတည်ပြုလိုက်သည်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း console အသစ်တစ်ခုနှင့်အတူ hardware ကဏ္sectorသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
Ataribox ဟုခေါ်သောကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကိုကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသောဗီဒီယိုအသစ်ဖြင့်မကြာသေးမီကအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် Atari သည်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် developer များကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအစောပိုင်းအဆင့်များ၌ရှိသည်။
"အသစ် Atari ထုတ်ကုန်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” ဗွီဒီယိုအသစ်သည်အသေးစိတ်များစွာမဖော်ပြထားပါ ပုံရိပ်များတွင်၎င်းကိုသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအချို့သောဆိပ်ကမ်းများကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ယခုအချိန်တွင်လူအများစုက Atari console အသစ်သည်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုအာမခံသည် emulator စတိုင်လ် ဂန္ထဝင် NES Nintendo ကပြုလုပ်သည်.
Ataribox အရောင်းမြှင့်တင်ရေးစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်“ Jobs” နှင့်“ Dev” ဟုခေါ်သောခလုတ်နှစ်ခုရှိပြီးဒီပလက်ဖောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
၁၉၇၂ တွင် Atari Interactive ဟူသောအမည်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဂိမ်းကုမ္ပဏီသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပင်တန်ဖိုးထားသည့်ဂိမ်းများကိုတီထွင်ရန်လာသည်။ မည်သူမျှမမှတ်မိလျှင်စတိဗ်ဂျော့ဘ်သည်ပင် ၁၉၇၀ တွင် Atari အတွက်ဂိမ်းများကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။
1984 ခုနှစ်တွင်မူရင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည် နှစ်ပိုင်းခွဲAtari Games သည် Arcade ဂိမ်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ စားသုံးသူထုတ်ကုန်များခွဲခြင်းကို Tramel Technology ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီ၏လက်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Atari Corporation ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ၁၉၉၆ တွင် Atari ကော်ပိုရေးရှင်းသည်သိုလှောင်ရေးမီဒီယာထုတ်လုပ်သည့် JT Storage နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် Hasbro Interactive မှနောက်ထပ်ဂိမ်းရေးဆွဲသူတစ် ဦး သည်ကုမ္ပဏီကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Infogrames Entertainment မှ Hasbro Interactive ၏လက်ရာများကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Atari Interactive ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Atari Interactive သည် GT Interactive ဟူသောအမည်ဖြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကိုလိုင်စင်ချပေးခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကြီးမားသောအလေးချိန်ကြောင့် Atari Inc သို့၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Atari နှင့် Atari Interactive နှင့်အခြားအုပ်စုကုမ္ပဏီများသည်ဒေဝါလီခံရန်တင်သွင်းခဲ့သည်။တစ်နှစ်ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘဏ္problemsာရေးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဝင်ငွေဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကုမ္ပဏီသည်လူမှုရေးနှင့်ကျပန်းဂိမ်းကစားခြင်းကဏ္ launch ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည် Atari ကာစီနို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » consoles စ » ဒဏ္legာရီကုမ္ပဏီ Atari သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်သစ်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်
Tesla Motors ကြော်ငြာကိုမှတ်တမ်းတင်ချင်ပါသလား။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ပရိသတ်များအားဆုချသည်